Xisaabtan MOOC waxa loogu talagalay inay ku taageerto u gudbida dugsiga sare una gudubta tacliinta sare. Ka kooban 5 qaybood, diyaarintan xisaabtu waxay kuu ogolaanaysaa inaad xoojiso aqoontaada oo kuu diyaariso gelitaanka tacliinta sare. MOOC sidoo kale waa fursad lagu qiimeeyo aqoontaada dhamaadka dugsiga sare iyo in dib loo eego fikradaha xisaabeed ee lagama maarmaanka u ah isdhexgalka wanaagsan ee tacliinta sare. Ugu dambeyntii, waxaad ku dhaqmi doontaa xallinta mashaakilaadka, taas oo noqon doonta hawl aad muhiim u ah waxbarashada sare. Hababka qiimaynta kala duwan ayaa la bixiyaa: su'aalo kala doorasho badan, layliyo codsi oo badan oo lagu tababaro, iyo mashaakilaadka la xalin doono, kuwaas oo ay qiimayn doonaan ka qaybgalayaasha.
Ururinta Xisaabta: 1- Soo saarista iyo Barashada Hawlaha Diisambar 19, 2021Tranquillus
READ Abuur ganacsi internet ah softiweerka SYSTEME.IO
horeUrurinta Xisaabta: 3- Tirooyinka isku dhafan
socdaUrurinta Jirka: 3- Mowjadaha Makaanikada